Maxaa ka ogtahay muwaadiinta Soomaaliyeed ee madaxda ka noqday dalka Tanzania? – Bandhiga
Home Maxaa ka ogtahay muwaadiinta Soomaaliyeed ee madaxda ka noqday dalka Tanzania?
Maxaa ka ogtahay muwaadiinta Soomaaliyeed ee madaxda ka noqday dalka Tanzania?
in Maxaa ka ogtahay muwaadiinta Soomaaliyeed ee madaxda ka noqday dalka Tanzania?
Tanzania oo ka mid ah dalalka Bariga Afrika waxa uu ka mid yahay dalalka ay gaadhay Xadaaradda Soomaalida gaar ahaan Diin faafinta ay sameeyeen Wadaadada Soomaaliyeed ee Suufiyada boqolaal sano ka hor taaso keentay in Islaamka uu gaaro inta badan dalalka Afrika.
Marka laga soo tago Soomaalida u hayaamay dalkaasi Todobaatameeyadii iyo wixii ka dambeeyay 1991 waxaa jira Soomaali badan oo Dalkaasi gaaray wixii ka horeeyay 1900, kuwaasoo halkaasi u tagay Diin faafin iyo waliba Ganacsi.
Waa dhab in Soomaalida gadaal ka tagay Dalkaasi Ganacsi iyo dhaqaale badan ay ka sameeyeen dalka Tanzania, hadana wax saameyn ah kuma aysan yeelan dhinaca Siyaasadda.
Laakiin Soomaalida boqolaal sano ka hor Diinta Islaamka gaarsiiyay dalka Tanzania ee sababay qaybta ugu badan in dadka Reer Tanzania ay noqdaan Muslimiin ayaa sidoo kale caruurta ama dhashii ay ka tageen qayb ka noqday Siyaasadda dalkaasi, kuwaasoo ku dhex milmay Dadka reer Tanzania.
Hadaba, waxaan Tusaale u soo qaadanaynaa Abdurahman Kinane iyo Hussein Bashe oo ah laba Siyaasi oo si weyn looga yaqaano Dalka Tanzania.
Abdulrahman Omar Kinana waa Siyaasi Tanzanian ah oo Asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya, waxa uuna ku dhashay Magaalada Arusha October 1951. Abdurahman Kinana waxa uu 20 sano ka tirsanaa ciidamada militeriga isagoo ahaa Korneel, Waxa uuna qabtay Jagaayin kala duwan sida Wasiirka Gaashaandhiga, Wasiir ku xigeenka Gaashaandhiga iyo waliba Wasiir ku xigeenka Wasaarada arimaha dibadda xiliyo kala duwan.
Sidoo kale, Abdurahman Kinana waxa uu noqday Af hayeenkii ugu horeeyay East African Legislative Assembly sanadihii 2001 ilaa 2006. Mr Kinana ayaa sidoo kale ahaa Xoghayaha guud Xizbiga xukuma dalkaasi Chama Cha Mapinduzi ilaa iyo sanadii 2012, Waxa uuna xubin ka ahaa Baarlamaankii Tanzaaniya ee deegaanka Arusha muddo 10 sano ah.
Abdurahman Kinana waxaa la dhihi karaa Waa siyaasi wax wax wayn taray Dadka Reer Tanzania taasoo timid ka dib marka uu kalsooni iyo Jacayl uu kala kulmay dadka Reer Tanzania oo aan u muujin in asal ahaan ka soo jeedo Soomaaliya oo uu yahay nin Ajanabi ah.
Siyaasiyiinta Asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya ee wax ka noqday Dalka Tanzania waxaa ka mid ah Hussein Mohamed Bashe ku dhashay Nzega, Tabora, Tanzania 26 August 1975, waxa uuna ka tirsan yahay Baarlamaanka dalka Tanzania tan iyo sanadii 2015 waxa uuna ka soo galaa Nzega Urban constituency.
Hussein Bashe waa Siyaasi ay ku kalsoon yihiin Dalka uu ku dhashay ee Tanzania islamarkaasina uu wax ku bartay mana uusan la kulmin wax isir sooc ah maadaamaa Aabihii iyo Awooweyaashiisa ay ka soo jeedaa dalka Soomaaliya.
Marka laga yimaado labadaan nin Dalka Tanzania waxaa ku nool Ganacsato Mugleh iyo Aqoon yahano Soomaaliyeed oo wax weyn tara dhaqaalaha Dalka Tanzania, taasoo inta badan Soomaalida aysan ka warqabin.